घर’ मा ऋचा नहुनुले सम्बन्धमा फाटो ? | My News Nepal
घर’ मा ऋचा नहुनुले सम्बन्धमा फाटो ?
काठमाडौं । अभिनेता तथा निर्देशक अर्पण थापा र अभिनेत्री ऋचा शर्माले धेरै फिल्ममा सहकार्य गरेका छन् ।दुबैले मिलेर 'आधा लभ' र 'सुनकेसरी' फिल्म बनाए भने धेरै फिल्ममा प्रेम–प्रेमिका भएर पनि अभिनय गरेका छन् । अहिले उनीहरु एकअर्का भएको फिल्ममा मात्र काम गर्ने गरेको चर्चा सुनिन्छ ।
बिहीवार अर्पणले निर्देशन गर्ने नयाँ फिल्म ‘घर’ को घोषणा गरियो । यसमा उनको निर्देशनसँगै लेखन र अभिनय पनि रहनेछ । फिल्ममा दुई हिरोइन हुने भए पनि फाइनल भइसकेका छैनन् । शर्मिला पाण्डेको लगानीमा निर्माण हुने फिल्म हरर जानरामा निर्माण हुन लागेको हो । माघबाट फिल्मको छायांकन सुरु हुँदैछ ।
‘घर’ मा ऋचा नहुनुले दुईको सम्बन्ध विग्रिएको कुरालाई थप मसला मिलेको छ । फिल्मको घोषणा सभामा अर्पणलाई पत्रकारले ऋचासँग सहकार्य टुटेको हो भन्ने प्रश्न गरे । उनले एउटा फिल्ममा सँगै काम नगर्दा सहकार्य टुटेको भन्नु गलत हुने बताए । उनी भन्छन्, काम गर्ने क्रममा कहिले सहकार्य हुन्छ त कहिले हुँदैन । यो ठूलो कुरा होइन ।
एकपछि अर्को फिल्म साथ गर्नुले उनीहरु प्रेममा रहेको चर्चा चल्न थालेको पनि धेरै भइसकेको छ । गत वर्ष फिल्म फिर्के को पत्रकार सम्मेलनमा अभिनेत्री ऋचाले यस विषयमा मुख खोलेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, अर्पण विवाहित हो । हाम्रो नाम एकअर्कासँग जोड्नु पाप हो ।
यस वर्ष दुईले हरर जानराको फिल्म सुनकेसरी बनाएका थिए । फिल्मलाई अर्पणले निर्देशन गरेका थिए । दुईले उक्त फिल्म रिलिज नहुँदै जोसमा सिक्वेल बनाउने समेत घोषणा गरे । तर, उक्त फिल्म बक्सअफिसमा असफल भएपछि दुईको सम्बन्ध सन्तुलित नभएको चर्चा, परिचर्चा सुरु भएको छ ।